Faahfaahin ka soo baxaysa dagaal khasaare geystey oo ka dhacay Buuraha Galgala – SBC
Faahfaahin ka soo baxaysa dagaal khasaare geystey oo ka dhacay Buuraha Galgala
Posted by Webmaster on December 5, 2012 Comments
Iyadoo iska horimaad hubaysan oo khasaare dhimasho & dhaawac dhaliyey uu xaley ka dhacay buuraha Galgala ee duleedka magaalada Boosaaso ayaa waxaa soo baxaysa faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan iska horimaadkan khasaaraha uu geystey.
Iska horimaadkan hubaysan wuxuu yimid ka dib markii koox hubaysan oo la sheegay inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin ay weerar ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada Puntland, waxaana halkaasi ka dhacay tacshiirad la isku adeegsadey noocyada kala duwan ee hubka oo mudo fara badan socotey.
Warar SBC ka heshay ilo wareed oo kala duwan ayaa sheegaya in iska horimaadka ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan Puntland & kooxdii weerarka soo qaadey.
Dagaalka hubaysan waxaa sida laga soo xigtey wasiirka amniga Puntland Col.Khaliif Ciise Mudan ku dhintey 7 ka mid ah xoogagii weerarka soo qaadey ee Shabaabka, halka warsaxaafadeed ka soo baxay Puntland lagu xaqiijiyey in 2 askari oo ka tirsan dhanka ciidamada Puntland ay ku dhinteen tacshiiradii la is waydaarsanayey.
Link-gan AUDIO ka dhageyso shirkii jaraa’id ee wasiirka.
HALKAN KA DHAGEYSO AUDIO
Laakiin khasaaraha soo gaarey ciidamada Puntland waxaa sii kordhiyey ka dib markii miino la kacdey baabuur gurmad ahaan ugu socdey halkii wax ka dhaceen, iyadoo qaraxii miinada ay ku dhinteen 10 askari sida uu xaqiijiyey wasiirku.
Khaliif Ciise wuxuu sheegay in ciidamadu iska difaaceen weerar ay ku soo qaadeen kooxdaasi, isagoo sheegay in 4 ka mid ah 7-dii nin ee ay dileen ciidamadu la soo gaarsiiyey Isbitaalka magaalada Boosaaso, iyadoo saxaafada la tusay.
Warsaxaafadeedka Puntland ka soo baxay waxaa lagu sheegay in ayaa sheegaysa in ay aaminsan tahay in weerarada Al-shabaab ay dhiirigalinayaan wax lagu tilmaamay kooxo ujeedooyin siyaasadeed leh oo aan war saxaafadeedka lagu xusin.
Dhinaca kale wakaalada wararka Reuters oo wareysi la yeelatey mid ka mid ah saraakiisha Shabaabka ayaa sheegay in weerarkaasi ay iyagu ka dambeeyey.
Sheekh Cabdicasiis Abu-Muscab oo ah afhayeenka hawlgalada Shabaabka ayaa sheegtey in weerarkii xaley ku dileen sida hadalka uu u dhigay 17 askari oo ka tirsan ciidamada Puntland, inkastoo saraakiisha Puntland ay xaqiijiyey laba askari oo weerarka ku dhimatey iyo 10 kale oo miino la kacdey gaarigii ay wateen.
Iska horimaadkan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole uu bishii wareysi uu siiyey wakaalada wararka ee Reuters uu ku sheegay in boqolaal ka tirsan xoogaga Shabaabka ay soo galayaan deegaanada Puntland si buu yiri madaxweynuhu ay u galiyaan qalqal amaanka Puntland.